“Ianareo no Vavolombeloko”—Isaia 43:10
“‘Ianareo no vavolombeloko’, hoy i Jehovah.”—ISAIA 43:10.
Inona no nataon’ny Israelita mba hampisehoana fa vavolombelon’i Jehovah izy ireo?
Inona no dikan’ny anaran’Andriamanitra?
Inona no hataontsika raha tsapantsika fa tombontsoa ny mitondra ny anarana masin’Andriamanitra?
1, 2. a) Inona no atao hoe vavolombelona, ary inona ilay zava-dehibe tsy resahin’ny fampitam-baovaon’ity tontolo ity? b) Nahoana i Jehovah no tsy miantehitra amin’ny fampitam-baovaon’ity tontolo ity?
INONA no atao hoe vavolombelona? Izao no famaritana omen’ny diksionera iray: “Olona nanatri-maso zava-nitranga iray, ary mitantara an’ilay izy.” Misy gazety iray antsoina hoe Ny Vavolombelona (anglisy) any Afrika Atsimo. Efa 160 taona mahery no nisian’izy io. Tena mety ilay anarana satria ny hanao tatitra marina momba ny zava-mitranga eran-tany no antony amoahana gazety. Nampanantena ny mpamorona an’ilay gazety fa hilaza “ny marina, ary ny marina ihany.”
2 Mampalahelo fa matetika ny fampitam-baovao no tsy milaza momba an’ireo zavatra tena lehibe, na milaza ihany fa tsy izay tena marina. Tsy mampahafantatra ny marina momba an’Andriamanitra, ohatra, izy ireo. Efa nilaza tamin’ny alalan’i Ezekiela mpaminany anefa ilay Andriamanitra Mahery Indrindra hoe: “Tsy maintsy ho fantatr’ireo firenena fa izaho no Jehovah.” (Ezek. 39:7) Tsy miantehitra amin’ny fampitam-baovaon’ity tontolo ity ilay Mpanjakan’izao rehetra izao. Manana Vavolombelona valo tapitrisa eo ho eo izy mba hampahafantatra an’ireo firenena ny momba azy sy izay nataony ary izay efa ataony ho an’ny olombelona. Mitory momba an’ireo fitahiana homen’Andriamanitra amin’ny hoavy koa ireo Vavolombelona ireo. Hoy ny Isaia 43:10: “ ‘Ianareo no vavolombeloko’, hoy i Jehovah, ‘eny, mpanompoko izay nofidiko.’ ” Hita hoe tena Vavolombelon’i Jehovah isika, raha ataontsika loha laharana ny asa fitoriana.
3, 4. a) Oviana ny Mpianatra ny Baiboly no niova anarana, ary inona no tsapan’izy ireo tamin’izany? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.) b) Inona avy ny fanontaniana hodinihintsika?
3 Voninahitra ny mitondra ny anaran’i Jehovah, satria izy no “Mpanjakan’ny mandrakizay.” Hoy izy: “Izany no anarako mandritra ny fotoana tsy voafetra, sy hahatsiarovana ahy hatramin’ny taranaka fara mandimby.” (1 Tim. 1:17; Eks. 3:15; ampitahao amin’ny Mpitoriteny 2:16.) Lasa nantsoina hoe Vavolombelon’i Jehovah ny Mpianatra ny Baiboly, tamin’ny 1931. Maro no nanoratra taratasy fankasitrahana, noho io fiovana io. Nisy fiangonana iray any Kanada nanoratra hoe: “Faly be izahay rehefa nahalala an’ilay vaovao tsara hoe ‘Vavolombelon’i Jehovah’ isika. Vao mainka izahay tapa-kevitra ny hiezaka ho mendrika an’io anarana vaovao io.”
4 Ahoana no ampisehoanao fa mankasitraka ny tombontsoa mitondra ny anaran’Andriamanitra ianao? Hainao ve ny manazava ny antony iantsoan’i Jehovah ny mpanompony hoe vavolombelony, ao amin’ny bokin’i Isaia?
5, 6. a) Inona no nataon’ny ray aman-dreny israelita, mba hampisehoana fa vavolombelon’i Jehovah izy? b) Inona koa no nasaina nataon’ny ray aman-dreny israelita, ary nahoana ny ray aman-dreny ankehitriny no tokony hanao toy izany?
5 ‘Vavolombelon’i Jehovah’ ny Israelita tsirairay tamin’ny andron’i Isaia, ary ‘mpanompon’Andriamanitra’ ilay firenena manontolo. (Isaia 43:10) Nasehon’ny ray aman-dreny israelita fa vavolombelona izy, rehefa nampianatra ny zanany momba izay nataon’Andriamanitra tamin’ny razambeny. Izao, ohatra, no nasaina nataon’izy ireo rehefa nitandrina ny Paska isan-taona: “Rehefa manontany anareo ny zanakareo hoe: ‘Fa maninona ianareo no manao izao fankalazana izao?’, dia lazao hoe: ‘Fanaovana sorona ny Paska ho an’i Jehovah izao. Nolalovany fotsiny mantsy ny tranon’ny zanak’Israely tany Ejipta, fony izy namely ny Ejipsianina fa nitsimbina ny tao an-tranontsika kosa.’ ” (Eks. 12:26, 27) Mety ho nitantara tamin’ny zanany koa ireo ray aman-dreny ireo fa nangataka alalana tamin’ny mpanjakan’i Ejipta i Mosesy, mba hahafahan’ny Israelita hanompo an’i Jehovah tany an-tany efitra. Namaly anefa i Farao hoe: “Fa i Jehovah moa no iza no tokony hihaino ny feony aho, ka handefa ny Israely?” (Eks. 5:2) Mazava ho azy fa notantarain’izy ireo koa ny fomba namalian’i Jehovah an’io fanontaniana io. Nandefa loza folo nandravarava an’i Ejipta izy, ary nanafaka ny Israelita tamin’ny tafik’i Farao, teo amin’ny Ranomasina Mena. Nasehon’i Jehovah tokoa fa izy no Mahery Indrindra. Ilay firenena mihitsy no vavolombelona fa i Jehovah no tena Andriamanitra sy Mpanatanteraka ny fampanantenany.
6 Azo antoka fa tsy ny zanany ihany no nitantaran’ny Israelita an’ireny zava-nitranga mampitolagaga ireny, fa ireo vahiny lasa mpanompo tao an-tranony koa. Tsapan’izy ireo mantsy fa voninahitra ny mitondra ny anaran’i Jehovah. Nasaina nampianatra ny zanany mba hanaraka ny fitsipik’i Jehovah momba ny fahamasinana koa izy ireo. Hoy i Jehovah: “Aoka ho masina ianareo, satria masina izaho Jehovah Andriamanitrareo.” (Lev. 19:2; Deot. 6:6, 7) Tokony hanao toy izany koa ny ray aman-dreny kristianina ankehitriny. Tsy maintsy ampiofanin’izy ireo mba ho masina ny zanany. Hanome voninahitra an’Andriamanitra ny fomba fiainan’izy ireo amin’izay.—Vakio ny Ohabolana 1:8; Efesianina 6:4.
Manome voninahitra ny anaran’Andriamanitra isika, rehefa mampianatra ny zanatsika momba azy (Fehintsoratra 5, 6)
7. a) Inona no vokany teo amin’ireo firenena manodidina, rehefa tsy nivadika tamin’i Jehovah ny Israelita? b) Inona no andraikitry ny olona rehetra mitondra ny anaran’i Jehovah?
7 Tena vavolombelona nanome voninahitra ny anaran’Andriamanitra ny Israelita, rehefa tsy nivadika. Nilazana izy ireo hoe: “Ho hitan’ny firenena rehetra eto ambonin’ny tany fa antsoina eo aminao ny anaran’i Jehovah, ka hatahotra anao tokoa izy ireo.” (Deot. 28:10) Mampalahelo anefa fa matetika ny Israelita no tsy nankatò an’i Jehovah. Imbetsaka izy ireo no nanompo sampy. Lasa lozabe toa an’ireo andriamanitry ny Kananita nivavahany izy ireo, ka nanao sorona ny zanany sady nampahory ny mahantra. Inona no lesona lehibe raisintsika avy amin’izany? Ilaintsika foana ny miezaka ho masina toa an’ilay Masina Indrindra, izay tompon’ny anarana entintsika.
“JEREO FA MANAO ZAVA-BAOVAO AHO!”
8. Inona no nasain’i Jehovah nataon’i Isaia, ary inona no vokany teo amin’i Isaia?
8 Efa nilaza i Jehovah fa hanatri-maso ny zava-mahagaga hataony ny firenen’Israely. Hanafaka azy ireo amin’ny fahababoana mantsy izy. (Isaia 43:19) Fampitandremana momba ny loza hanjo an’i Jerosalema sy ireo tanàna manodidina azy no tena resahin’ireo toko enina voalohany ao amin’ny bokin’i Isaia. Nasain’i Jehovah namerimberina an’ilay fampitandremana foana i Isaia, na dia fantany aza fa tsy hiraharaha an’izany ny olona. Mahalala ny ao am-po mantsy i Jehovah. Tena gaga tamin’ny nataon’ilay vahoaka i Isaia, ary nanontany an’Andriamanitra hoe mandra-pahoviana ilay firenena no tsy hibebaka. Namaly Andriamanitra hoe: “Mandra-paharavan’ny tanàna, ka tsy hisy mponina intsony, sady tsy hisy olona intsony ao amin’ireo trano, ary ho lao ny tany.”—Vakio ny Isaia 6:8-11.
9. a) Oviana no tanteraka ny faminanian’i Isaia momba an’i Jerosalema? b) Inona no fampitandremana efa nomena antsika?
9 Tamin’ny taona farany nanjakan’i Ozia Mpanjaka i Jehovah no naniraka an’i Isaia, izany hoe tamin’ny 778 T.K. tany ho any. Nanohy ny fanompoany nandritra ny 46 taona teo ho eo izy, hatramin’ny 732 T.K. tany ho any, tamin’ny fotoana nanjakan’i Hezekia. Mbola 125 taona taorian’izay vao noravana i Jerosalema, izany hoe tamin’ny 607 T.K. Nolazaina aloha be tamin’ny vahoakan’Andriamanitra àry izay hitranga amin’ny firenen’izy ireo. Mampitandrina ny olona mialoha be momba izay hitranga amin’ny hoavy koa i Jehovah ankehitriny, ary ny vahoakany no irahiny hanao izany. Efa 135 taona izao Ny Tilikambo Fiambenana no nampitandrina fa horavana tsy ho ela ny tontolon’i Satana, ka ny Fanjakana Arivo Taonan’i Kristy no hisolo azy.—Apok. 20:1-3, 6.
10, 11. Ahoana no nahatanterahan’ny faminanian’i Isaia tamin’ireo Israelita tany Babylona?
10 Tafavoaka velona tamin’ny fandravana an’i Jerosalema ny Jiosy maro, satria nankatò ka nitolo-batana tamin’ny Babylonianina. (Jer. 27:11, 12) Nentina ho babo tany Babylona izy ireo. Tany izy ireo no nanatri-maso ny fahatanterahan’ity faminaniana miavaka ity, 70 taona taorian’izay: “Izao no nolazain’i Jehovah, ilay Mpanavotra anareo, dia Ilay Masin’ny Israely: ‘Noho ny aminareo, dia halefako any Babylona ireny, ary hampidiniko ny bara hidin’ny fonja.’ ”—Isaia 43:14.
11 Notanterahin’i Jehovah io faminaniana io. Nanao fety ny mpanjaka sy ny olo-manan-kaja tao Babylona, indray alina, teo am-piandohan’ny volana Oktobra 539 T.K. Nisotro divay tamin’ireo fitaovana masina azo babo tany amin’ny tempolin’i Jerosalema izy ireo sady nidera ny andriamaniny. Tamin’izay indrindra ny tafiky ny Medianina sy Persianina no nanafika, ka resy i Babylona. Tamin’ny 538 na 537 T.K., dia nandidy ny Jiosy mba hanorina indray ny tempolin’i Jehovah tany Jerosalema i Kyrosy, ilay Mpanjaka nandresy an’i Babylona. Efa voalazan’i Isaia mialoha izany rehetra izany, anisan’izany ilay fampanantenan’i Jehovah hoe hanome izay ilain’ny vahoakany mibebaka izy ary hiaro azy ireo rehefa hiverina any Jerosalema izy ireo. Nilaza Andriamanitra fa ‘vahoaka noforoniny ho azy’ izy ireo, ‘mba hitantara ny zavatra mendri-piderana nataony.’ (Isaia 43:21; 44:26-28) Nanorina indray ny tempoly tao Jerosalema izy ireo rehefa tafaverina, ka lasa vavolombelona fa i Jehovah ihany no tena Andriamanitra ary manatanteraka ny teniny foana izy.
12, 13. a) Iza no niaraka tamin’ny Israelita mba hanorina indray ny tempoly? b) Inona no tokony hataon’ny “ondry hafa” ankehitriny, ary inona no antenain’izy ireo amin’ny hoavy?
12 Nisy olona hafa firenena an’arivony lasa nanompo an’i Jehovah niaraka tamin’ny Israelita, rehefa niverina mba hanorina ny tempoly izy ireo. Mbola niampy ireny olona ireny, tatỳ aoriana. (Ezra 2:58, 64, 65; Est. 8:17) Misy “vahoaka be” anisan’ny “ondry hafa” koa ankehitriny manohana an’ireo Kristianina voahosotra, izay antsoina hoe “Israelin’Andriamanitra.” (Apok. 7:9, 10; Jaona 10:16; Gal. 6:16) Samy mitondra an’ilay anarana hoe Vavolombelon’i Jehovah ny voahosotra sy ny vahoaka be.
13 Tena ho faly ny vahoaka be mandritra ny Fanjakana Arivo Taonan’i Kristy. Hanazava amin’ireo hatsangana amin’ny maty izy ireo hoe nanao ahoana izany hoe Vavolombelon’i Jehovah nandritra ny andro faran’ity tontolo ity izany. Tsy hahazo izany tombontsoa izany isika, raha tsy manao zavatra mifanaraka amin’ilay anarantsika ary miezaka mba ho masina foana. Manao fahadisoana anefa isika, na dia miezaka mafy aza. Mila mangata-pamelana àry isika isan’andro. Mila miaiky isika fa mpanota, ary mitadidy fa voninahitra lehibe ny mitondra ny anarana masin’Andriamanitra.—Vakio ny 1 Jaona 1:8, 9.
14. Inona no dikan’ilay anarana hoe Jehovah?
14 Tsara ny misaintsaina ny dikan’ny anaran’Andriamanitra, mba hahatsapantsika bebe kokoa fa voninahitra ny mitondra ny anarany. Adika matetika hoe “Jehovah” ilay anarana. Avy amin’ny matoanteny hebreo milaza fanaovan-javatra izy io ary azo adika hoe “tonga ho.” Ny hoe Jehovah àry dia heverina fa midika hoe “Manao Izay Hahatonga Izy.” Mifanentana tsara amin’Andriamanitra io famaritana io, satria izy no Mpamorona an’izao rehetra izao sy ny anjely ary ny olombelona. Mpanatanteraka ny fikasany koa izy. Ataony foana izay hahatonga ny fikasany sy ny sitrapony ho tanteraka tsikelikely, na inona na inona ataon’ny mpanohitra, toa an’i Satana.
15. Inona no ianarantsika momba an’ilay anarana hoe Jehovah, rehefa jerena ny resaka nataon’Andriamanitra tamin’i Mosesy? (Jereo ilay efajoro hoe “ Anarana Misy Heviny Lalina.”)
15 Nampahafantatra bebe kokoa momba ny dikan’ny anarany i Jehovah, rehefa naniraka an’i Mosesy hitarika ny vahoakany hiala tao Ejipta. Matoanteny hebreo mifandray amin’ilay hoe “tonga ho” no nampiasainy. Hoy izy tamin’i Mosesy: “Hoporofoiko fa izaho ilay mahavita izay iriko”, na koa hoe: “Ho Tonga Izay Rehetra Tiako Aho.” Hoy koa izy: “Izao no holazainao amin’ny zanak’Israely: ‘Ilay hoporofoiko [ho tonga ho] no naniraka ahy ho atỳ aminareo.’ ” (Eks. 3:14) Na inona na inona mitranga àry, dia afaka ny ho tonga izay rehetra ilaina i Jehovah, mba hanatanterahana ny fikasany. Noporofoiny tamin’ireo Israelita fa Mpanafaka izy, Mpiaro, Mpitarika, ary Mpanome izay rehetra ilain’izy ireo.
ANKASITRAHO NY TOMBONTSOANAO
16, 17. a) Inona no hataontsika raha tsapantsika fa tombontsoa ny mitondra ny anaran’Andriamanitra? b) Inona no hohazavaina ao amin’ny lahatsoratra manaraka?
16 Mbola porofoin’i Jehovah foana hatramin’izao hoe marina ny dikan’ny anarany. Omeny antsika izay ilaintsika isan’andro sy izay ilaintsika mba hananana finoana matanjaka. Ilay anarana hoe Jehovah anefa dia tsy midika fotsiny hoe tonga izay rehetra tiany izy. Midika koa izy io hoe ataony izay hahatonga ny zavaboariny hanao izay rehetra ilaina, mba hahatanteraka ny fikasany. Mampiasa ny Vavolombelony, ohatra, izy mba hanao ny asany. Mandrisika antsika izany mba hiezaka foana hanao zavatra manome voninahitra ny anaran’Andriamanitra. Izany no nataon’i Kåre, Vavolombelona be zotom-po nandritra ny 70 taona. Hoy io rahalahy 84 taona any Norvezy io: “Tsapako fa voninahitra lehibe ny manompo an’i Jehovah, ilay Mpanjakan’ny Mandrakizay, sy ny hoe anisan’ny olona mitondra an’ilay anarany masina. Tombontsoa lehibe ny manazava ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly sy ny mahita ny olona faly be rehefa mahalala an’izany. Tena mahafaly ahy, ohatra, ny manazava momba ny sorom-panavotan’i Kristy. Tiako koa ny miresaka amin’ny olona hoe noho io sorona io, dia azontsika atao ny miaina mandrakizay ao amin’ny tontolo vaovao anjakan’ny fiadanana sy ny fahamarinana.”
17 Marina fa mihasarotra izao ny mahita olona maniry hianatra momba an’Andriamanitra, any amin’ny faritany sasany. Tena faly toa an’i Kåre anefa isika rehefa mahita olona mihaino ka afaka mampianatra azy momba an’ilay anarana hoe Jehovah. Tsy Vavolombelon’i Jehovah fotsiny isika, fa vavolombelon’i Jesosy koa. Hanazava izany ny lahatsoratra manaraka.
Anarana Misy Heviny Lalina
Ny dikan’izy io:
“Manao Izay Hahatonga Izy”
Nahoana izy io no mety tsara?
Namorona ny zava-drehetra i Jehovah
Mbola manao izay hahatanteraka ny sitrapony sy ny fikasany izy
Asehon’io anarana io fa:
Ho tonga izay rehetra ilaina izy mba hanatanterahana ny fampanantenany
Ataony izay hahatonga ny zavaboariny hanao izay rehetra ilaina, mba hahatanteraka ny sitrapony
Tsy misy zavatra tsy vitany mba hanatanterahana ny fikasany
Hizara Hizara “Ianareo no Vavolombeloko”